Connecting Harting: inona no tokony ho fantatrao momba ireo mpampifandray ireo | Fitaovana maimaim-poana
Angamba efa naheno momba ny Ireo mpampifandray Harting ary izany no antony nahatongavanao teto amin'ity lahatsoratra ity hitady vaovao, na angamba sendra nahita azy ianao. Amin'ireo tranga roa ireo dia eto aho hiezaka ny hanazava ny momba ity marika mampifandray ity sy ireo vokatra mahaliana indrindra.
Tena malaza izy ireo ao fampiharana indostrialy sy injeniera, saingy mety mahasoa azy ireo ho an'ny mpanamboatra sasany sy ny tetikasany DIY Arduino. Izany no antony tokony hahafantaranao bebe kokoa momba izay mety ho entin'i Harting aminao ...
Fampahalalana bebe kokoa momba ny singa elektronika hafa mety hahaliana anao amin'ny tetikasanao eto.
1 Momba an'i Harting
2 Mpampitohy Harting Han
2.1 Modely mpampitohy Han
3 Aiza no hividianana ny vokatra Harting?
Momba an'i Harting
harting dia orinasa natsangan'i Wilhelm sy Marie Harting tamin'ny 1945. Nanomboka tamin'ny orinasa kely tao anaty garazy iray metatra toradroa monja izy rehetra, tao amin'ny fivarotana fanamboarana any Minden, Alemana. Tao izy ireo dia nanomboka nanamboatra fitaovana elektronika sasany hampiasaina isan'andro, toy ny jiro fanaovan-jiro, kojakoja elektrika, fitaovana amin'ny fefy elektrika, vy vy, jiro elektrika, vy vy, sns.
Wilhelm Harting dia nahatakatra fa ny indostrian'ny Alemanina dia mila vokatra teknika, ary noho izany dia nanolo-tena hatramin'ny voalohany izy hamorona ireo vokatra ireo ary hihaona amin'ny tanjon'izy ireo amin'ny kalitao sy fanavaozana. Ny vokatra azon'izy ireo dia nankasitrahana fatratra noho ny rfahamendrehana, fahamoram-bidy sy fahaiza-miasa. Raha ny marina, ny filozofia nataon'i Harting dia hita taratra tamin'ny andianteny iray nataon'i Wilhelm: 'Tsy mila vokatra haverina aho".
After the Ny fahafatesan'i Wilhelm tamin'ny 1962Marie Harting dia nandray ny fifehezana ny orinasa nandritra ny fotoana fohy, mandra-pahatongan'ny zanany roa lahy Dietmar sy Jürgen Harting naka azy. Tamin'ny 1987, Margrit Harting dia hiditra ao amin'ny orinasam-pianakavian'i Dietmar vadiny, izay iray amin'ireo mpiara-miasa aminy ankehitriny. Androany, i Philip FW Harting sy i Maresa WM Harting-Hertz no taranaka fahatelo mitondra an'ity orinasa malaza ity ...
Rehefa avy namorona ny karazan-vokatra rehetra izy ireo dia namorona Mpampifandray Han, marika Harting fananana izay fahombiazana lehibe teo amin'ny tsena ary hametraka ny tenany ho fenitra manerantany. Ity singa ity dia nanjary ny tsena lehibe indrindra ho an'ny vondrona teknolojia iray manontolo.
Tsikelikely dia nitombo ny isan'ny mpikambana ao aminy ary ny zavamaniry mpamokatra, ny fahombiazana taorian'ny fahombiazana. Amin'izao fotoana izao dia efa manana izy ireo Zavaboary famokarana 14 ary ivontoerana fivarotana 43 erak'izao tontolo izao. Ankehitriny dia nanangana ny tenany ho iray amin'ireo mpamatsy vola lehibe indrindra eran-tany izy ireo ho an'ny vahaolana amin'ny fifandraisana indostrialy ho an'ny angona, signal ary famatsian-kery.
Ho fanampin'ireo mpampifandray, ny orinasa manamboatra singa hafa koa, toy ny boaty fisoratana anarana elektronika ho an'ny fampiasana ara-barotra, mpikatroka electromagnetic ho an'ny famokarana maotera sy indostrialy, fitaovana famerana, tariby fiara, ary koa karazana fitaovana sy rindrambaiko hafa ho an'ny fampiharana samihafa, ao anatin'izany ny robotika.
Mpampitohy Harting Han
Ny iray amin'ireo vokatra kintana, araka ny efa nanamarihako, dia Mpampifandray Han nataon'i Harting. Misy karazany marobe amin'izy ireo ary mampiavaka azy ireo amin'ny fahatsorany sy ny fikirakirany haingana, ny fahamendrehana omen'izy ireo, ny fahafaha-mampiasa, ny tsingerin'ny fiainana maharitra, ary ny fahafaha-mivory nefa tsy mampiasa karazana fitaovana.
Ity farany dia tena manan-danja tokoa, satria maro amin'ireo mpampifandray misy ao amin'ny orinasa, na amin'ny fampiasana indostrialy na amin'ny fampiasana hafa, dia manondro foana ny fampiasana fitaovana sasany amin'ny fametrahana azy ireo.
Ho fanampin'izany rehetra izany, ny mpampitohy Harting Han koa dia voaaro (IP) hahafahany mahatanty ny fepetra ivelany misy ny hamandoana, vovoka, vatana vahiny, fikorontanana mekanika, ranon-javatra nalatsaka sns Mazava ho azy, ny fiarovana dia voamarina araka ny fenitra IEC 60 529 sy DIN EN 60 529.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny Han sy ny kojakoja
Modely mpampitohy Han
Ireo mpampifandray indostrialy Hartig Han ireo dia natao hamaly ny fepetra takiana amin'ny indostria rehetra, varotra, fambolena, ampiasaina amin'ny atrikasa, sy karazana fampiharana hafa. Misaotra ny fivoriany mora sy ny mekanika, ny fiarovana ny herinaratra ary manohitra ny fepetra ivelany hafa.
Ny mpampifandray Hartin dia voasokajy araka ny fampiharana azy, isan'ny bao, voltatra ary fiaretana ankehitriny, manasongadina ireto manaraka ireto karazana:
Manana seranan-tsambo izy ireo
Manana Push Pull
Amin'ny ankapobeny, izy ireo dia afa-po amin'ny singa toy ny hood sy ny fotony, ankoatry ny fananany karazana raha izy ireo lahy na vavy, ho an'ny karazana fivoriambe. Ary mazava ho azy fa i Harting koa dia manana karazana kojakoja fanampiny toy ny tariby, boaty, fittings, sns.
Aiza no hividianana ny vokatra Harting?
Azonao atao vidio ireto mpampitohy sy vokatra hafa ireto Mandeha amina magazay manokana isan-karazany, ary koa amin'ny tranokala sasany mivarotra azy ireo. Samy hafa be ny vidin'izy ireo arakaraka ny karazana vokatra nofidina, saingy ireto misy fanasongadinana vitsivitsy:
Harting 10m Ethernet mpampitohy lehilahy
Connector IDC Harting ho an'ny PCB - fonosana singa 3
Crimper ho an'i Harting Han D, S ary C
Harting D-Sub ho an'ny soldering amin'ny PCB na ho an'ny faladiany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fitaovana elektronika » Connecting Harting: inona no tokony ho fantatrao
PCF8574: Momba ny I2C I / O Expander ho an'ny Arduino